Ivenkile yolondolozo lwezinto zaseBulgaria eParis isule i-10 yezigidi zeerandi
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » ulwaphulo-mthetho » Ivenkile yolondolozo lwezinto zaseBulgaria eParis yacima i-10 yezigidi zeerandi
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zaseFransi ezaphulayo • Iindaba zeLuxury • iindaba • abantu • Safety • Shopping • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ubucwebe bexabiso le-10 yezigidi zeerandi kwi-boutique Paris heist
Ukuphanga eParis kwenzeke ezinzulwini zobusuku ngoLwesibini. Ngelixa amapolisa engekayibizi ngokusemthethweni ivenkile, ubukho obunzima bokunyanzeliswa komthetho babonwa kwindawo yokuthengisa yaseBulgaria, ekubonakala ukuba yayiyeyona nto kujoliswe kuyo ngabaphangi.
Abaphangi babetha ivenkile yobucwebe yaseBulgaria kumbindi weParis.
Ubucwebe bexabiso le-10 yezigidi zeerandi kubiwe emini.
Amapolisa aseFrance abamba abarhanelwa ababini emva kwesantya esiphezulu.
Ivenkile ephezulu yobucwebe eParis kwindawo ebalaseleyo iVendôme ibethwe ngabaphangi kwaye uqikelelo lwe-10 yezigidi zeedola (i-11.8 yezigidi zeedola) kwizinto zobucwebe zichazwe njengebiwe kwimini yobhedu emini.
Ukuphanga kwenzeke ngenjikalanga yangoLwesibini. Ngelixa amapolisa engekayibizi ngokusemthethweni ivenkile, ubukho obunzima bokunyanzeliswa komthetho babonwa e IBulgari i-boutique, ekubonakala ukuba yayijolise kubaphangi.
Paris Amapolisa sele ebambe abarhanelwa ababini, kwaye kusaqhubeka nokukhangelwa kwamanye amasela.
Kubanjwe abarhanelwa ababini ngethuba bezama ukubaleka kwimeko yolwaphulo-mthetho, amapolisa athi, ngaphandle kokunikezela ngeenkcukacha ezithe vetshe, kodwa eminye imithombo yamapolisa ibonise ukuba ukuphanga kuguquke kwaba sisantya esiphezulu, nanjengoko abarhanelwa bezama ukubaleka besebenzisa i-BMW imoto kunye nezithuthuthu ezibini.
Ngokwengxelo zosasazo zalapha, elinye ipolisa lonzakele kancinci ngexesha lokuleqa, ngethuba etshayiswa yimoto, ngelixa omnye wabarhanelwa abavalelweyo edutyulwe emlenzeni.
Inani elingaziwayo labarhanelwa lisagcwele. Ngokweengxelo bakwazile ukubaleka ngokutsala izinto ezinkulu ezibiweyo ngexabiso eliqikelelweyo nge-10 yezigidi zeerandi.
Esi sehlo sesokugqibela kuludwe lwezinto zokuhombisa zexabiso eliphezulu kwikomkhulu laseFrance kweli hlobo. NgoJulayi, umphangi oxhobileyo waphakamisa amatye anqabileyo kunye nobucwebe emini emaqanda Chaumet Ivenkile kufutshane neChamps-Elysées. Umphangi ngeso sihlandlo wabanjwa ecaleni kogxa kanye emva kolo hlaselo, kwaye ukuphangwa, okuxabisa phantse i-3 yezigidi ($ 3.5 yezigidi), kwafunyanwa.
Kuphela kweentsuku ezimbalwa emva kwe Chaumet heist, abaphangi ababini babetha a UDinh Van ivenkile, ubile ezinye ze- € 400,000 ezinkozo, kunye nezacholo zexabiso eliqikelelweyo nge- $ 2 yezigidi ($ 2.3 yezigidi).